Fannaanka Dayax Dalnuurshe oo ammaan kala dul dhacay degaanno ka tirsan Galmudug (Daawo) – Maanta Online
Dayax Dalnuurshe oo ka mid ah fannaaniinta Soomaaliyeed ee caanka noqday ayaa ammaan kala dul dhacay qaar ka mid ah degmooyin hoos taga maamul goboleedka Galmudug, taasi oo soo jiidatay dad isugu jiray rag iyo haween ka soo jeeda degaanadaas.
Fannaanka oo ka qeyb galay xaflad aroos ayaa waxa uu fadhiga ka kiciyay dadkii ka soo qeyb galay xaflad loo dhigay aroos Muqdisho ka dhacay, iyadoo intii aanu qabsan Maykarafoonka durba memberka uga sii hor mareen taageerayaashiisa.
Heesta uu Dayax Dalnuurshe halkaasi ka qaadayay oo lagu laray miyuusig si heer sare looga soo shaqeeyay, taasi oo shucuurta ka qeyb galayaasha xafladda arooska Dr. Mohamed Yaasiin Cabdullaahi iyo Mrs. Sucdi Cali Cawaale taariikhdu markay ahayd 13-kii Agosto 2019-ka.
Munaasabadda arooska oo ka dhacday Hotel-Palm ee magaalada Muqdisho, intii uu heesta qaadayay Fannaanka Dayax Dalnuurshe, ayaa ilbiriqsiyo kaddib waxaa jugta iyo jaanta isla helay dadkii garbihiisa soo buuxiyay.
Dayax Dalnuurshe oo ka mid ah fannaaniinta da’da yar ee degan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu taageerayaal fara badan ku leeyahay Soomaalida degan dalka gudihiisa iyo dibadiisa, hase yeeshee u guuray degaano ka tirsan gobollada Waqooyiga Soomaaliya xilli qoyska uu ka soo jeedo ay degan yihiin magaalada Muqdisho.
“maantaa talo loo dhan yahay loo dhisay Galmudug, Allow dhidibada u haay, ” ayaa ka mid aheyd ereyada heesta uu qaadayay Dayax Dalnurshe, isagoona mid u soo qaatay degmooyinka Hobyo, Guriceel iyo degaanno kale oo dhammaantood muujinaya ammaan la huwiyay degaanada ay ka soo jeedaan arooska cusub.
Maanta Online Media Group
← SIR CULUS: Yaa ka dambeeyay xasarada keentay in isbedel lagu sameeyo guddoonka Wakiilada Puntland?
Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo ka digay khatar ku soo wajahan xisbiga Dimoqoraadiga →
Xisbiga Trump oo dalbaday in Ilhan laga Eryo Congress-ka